Tsofa Granite lavaka, tsofa lavaka marbra voadio, tsofa lavaka vato, lohan'ny fanapahana firavaka diamondra, tsofa lavaka, fitrandrahana marbra, orinasa mpitrandraka beton ary mpanamboatra | Boda
Sitrana ny lavaka granit, tsofa lavaka marbra voadio, tsofa lavaka vato, lohan'ny fanapahana firavaka diamondra, tsofa lavaka, famolahana marbra, fandoroana beton
BOSENDA borosy vita amin'ny marbra sy granite avo lenta / Saw Hole marbra / Hole Concrete Hole dia manana sisin'ny nify maranitra, izay mahatonga azy io mateza kokoa noho ny mpanokatra lavaka elektrôlika (vilia fitaratra).
ho an'ny fandavahana fitaovana mafy sy mora volo toy ny marbra, seramika, simenitra, taila vita amin'ny seramika sns. Milamina, malama, tsy misy sisiny ny fanokafana ary tsy hamokatra trangan-javatra mihozongozona. Ny fanoherana fanapahana dia kely ary nohatsaraina ny hafainganam-pandeha. Rehefa vita ny fametahana dia mora ny manaingo sy manaisotra mora foana ny chips. Maharitra ny vokatra, miaraka amin'ny lelan maranitra, fanesorana puce malefaka amin'ny fandidiana mora. Ny fanesorana ny puce effets effetive be, ny ampahany amin'ny vatana malama, tsy mifikitra amin'ny antsy, fandavahana mahomby kokoa ary ataovy izay mahamety ny mpampiasa azy.
Ny lohan'ny fanapahana ny Granite Hole Saw dia vita amin'ny diamondra avo lenta, ny famonoana ny maripana avo, ny hamafiny avo, maranitra ary mateza. Ny famolavolana slotting dia namboarina ho olombelona, ​​maranitra ny lohan'ny antsy, kely ny fanoherana fanokafana, izay manampy amin'ny fanesorana puce, ary milamina tsy misy burr ny fisokafana. Ny forging amin'ny ankapobeny ny vatan'ny fandavahana dia mahatonga ny vatan'ny fandavahana ho marin-toerana kokoa, tsy misy resaka. Telozoro ny tahony, izay mafy orina kokoa amin'ny fandoroana herinaratra sy vise.
Vokatra ampiasaina amin'ny marbra, granite, vatokely, biriky vitrified, vato, taila vita amin'ny ceramic sy simenitra ary akora mafy hafa, fika manokana avy amin'ny 6-100MM, amin'ny fampiasana akora vita amin'ny diamondra avo lenta.
Ny rano na ny coolant dia tokony ampiana mba hahalava ny androm-piainana;
Ity karazana mpanokatra lavaka ity dia tsy misy fandavahana afovoany, noho izany dia mila mifandray an-tsokosoko ilay fitaovana miaraka amin'ny zoro 45 degre, ary avy eo manamboatra toerana marina aorian'ny fanokafana ny làlana alveolar;
Fikomiana 800-1000 eo ho eo isa-minitra;
Arakaraka ny maha lehibe ny mpanokatra ny lavaka no ilaina ny ambany hafainganam-pandeha. Rehefa saika handavaka ilay fandavahana dia tandremo mba hampiadana ny hafainganana;
Rehefa tsy mety ny fanesorana puce dia atsaharo aloha ny asa, ary avy eo manohy miasa aorian'ny fanadiovana
Previous: Saw vita amin'ny seramika vita amin'ny diamondra, fandavahana vera, tsofa holw fitaratra, vatan-kazo fitaratra, tsofa lavaka seramika, tsofa lavaka marbra
Manaraka: HSS loaka, tsofa loaka vy, tsofa loaka vy, fantsom-borosy vy haingam-pandeha haingam-pandeha, tsofa fantsom-by